Ihe omuma ihe omuma esi ewepu data site na iji Lxml na aririọ
Mgbe a bịara n'ịzụ ahịa ọdịnaya, mkpa nke nchịkọta weebụ enweghị ike ịbụ eleghara anya. A makwaara dịka nbudata data weebụ, ntanetị weebụ bụ usoro nyocha njirịrị njụma nke ndị na-ede blọgụ na ndị na-ere ahịa ahịa jiri wepụ data sitere na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa. Nchịkọta weebụ na-enye ndị ahịa ahịa ohere inweta ma chekwaa data na usoro bara uru ma dị mma.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-edekarị n'ụdị HTML ebe ibe ọ bụla nwere ihe ndekọ edere nke ọma. Ịchọta saịtị na-enye ha data na usoro JSON na CSV bụ ihe siri ike na mgbagwoju anya. Nke a bụ ebe nbudata weebụ na-abata. Otu ihe ntanetị weebụ na-enyere ndị ahịa aka iweputa data sitere na ọtụtụ ma ọ bụ otu na-esite na ya ma chekwaa ya na usoro ndị enyi.
Ọrụ nke lxml na Arịrịọ na nchịkọta data
N'ahịa ahịa, lxml na-ejikarị ndị na-ede blọgụ na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ wepụ data ọsọsọ na weebụsaịtị dị iche iche . N'ọtụtụ ọnọdụ, lxml na-ewepụta akwụkwọ edere n'asụsụ HTML na asụsụ XML. Webmasters na-eji arịrịọ iji mee ka ọnụọgụ nke data wepụtara site na ihe ntanetị weebụ. Arịrịọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ ọsọ ọsọ nke onye na-ekpochapu ihe iji wepụ data site na otu ma ọ bụ ọtụtụ isi mmalite.
Otu esi wepu data site na iji lxml na arịrịọ?
Dị ka onye na-elekọta weebụ, ịnwere ike ịwụnye lxml ngwa ngwa ma rịọ ya site n'iji pipụ arụ ọrụ..Jiri data dị mfe iji weghachite ibe weebụ. Mgbe ị natara ibe weebụ, jiri mpempe akwụkwọ weebụ iji wepu data site na iji usoro HTML ma chekwaa faịlụ na osisi, nke a maara dị ka Html.fromstring. Html.fromstring na-atụ anya ka ndị webmasters na ndị ahịa na-eji octets mee ihe dị ka ntinye aka ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji osisi page.content kama page.text
Ọmarịcha usoro osisi bụ ihe kachasị mkpa mgbe ịmepụta data na ụdị nke HTML . A na-eji ụzọ CSSSelect na ụzọ XPath chọta ihe ọmụma nke ibe weebụ wepụtara. Ihe kachasị, webmasters na ndị na-ede blọgụ na-esi ọnwụ na-eji XPath achọta ozi gbasara faịlụ dị mma dịka akwụkwọ HTML na XML.
Ngwa ndị ọzọ a tụrụ aro maka ịchọta ozi site na iji asụsụ HTML gụnyere Chrome Inspector na Firebug. Maka webmasters site na onye nyocha Chrome, pịa nri ka a depụtaghachi, họrọ na nhọrọ 'nyocha', 'kọwaa edemede nke mmewere, pịa nri ozugbo, wee họrọ' Detuo XPath '.
Ịbubata data site na iji eke
XPath bụ mmewere nke a na-ejikarị mee ihe na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa iji nyochaa njirimara ngwaahịa na mkpado ahịa. A na-esi na ntanetị wepụta data site na iji wepu ibe weebụ site na iji Eke Ọgba ma chekwaa n'ime ụdị mmadụ. Ịnwekwara ike ịchekwaa data na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ faịlụ ndekọ na ịkekọrịta ya na obodo na ndị ọzọ webmasters.
Na ụlọ ahịa ahịa ugbu a, njirimara nke ọdịnaya gị dị ọtụtụ. Egwuregwu na-enye ndị ahịa ohere ohere ịbubata data n'ime usoro a pụrụ ịhazi. Iji malite usoro nyocha nke onwe gị, ịkwesịrị ikpebi ihe ị ga-eji mee ihe. E wepụtara data na ụdị dị iche iche sitere na XML ka HTML. Nweta ngwa ngwa weghachite data site na iji ihe ntanetị weebụ na arịrịọ site na iji ntule ndị a tụlere n'elu Source .